We She Me: မိသားစုသုံး Eee PC
| FLAGS: This Blog , We
မဇနိ - 10/26/08, 11:37 PM
ပို့စ်အသစ်လေးတွေ့လို့ အပြေးလာဖတ်ပါတယ်။ သမီးလေးက အသံတွေ တစာစာနဲ့ စာရိုက်နေပြီပဲ။ ပို့စ်တွေသိပ်မတက်လို့ မမဘလော်ဂျာပါ ဘလော့ဂ်ကို သံယောဇဉ်ဖြတ်နေပြီလား တွေးနေရတာ။ အခုမှ အတွေးရပ်တော့တယ်။
khin oo may - 10/27/08, 12:24 AM
ဟုတ်တယ်။ရေးပါဦး။ အလုပ်များနေတယ် ဆိုလို့ အားနာလို့ မပြောဘဲ နေတယ်။ သိတ်ပြီး လေးနက် စရာ မလိုပါဘူး။ အစကတည်း က တောင်ရောက် မြောက်ရောက် ရေးလဲ ဖတ်နေကြတာဘဲ။။မှတ် မိသေးလား အမေ လာလို့ ညီ အစ်ကို နှစ်ယောက် တစ်ယောက် ၅၀၀ ဆီပေးပြီး အမေ ပြန်တော့ လေဆိပ် လိုက်ပို့ကြတာ။ အဲဒါ ကို အန်ဒီ ရေးတာထင်တယ်။ အဲဒါ လည်း ဝက် ဝက်ကွဲ အားပေးကြတာဘဲ။ အချိန် သိတ် မကုန်တဲ့ ပေါ့ပေ့ါ့ ပါးပါးလေးတွေ ရေးလို့ ရပါတယ်။ ခံစားချက် ကို နားလည် တယ်။ သိတ် အောင် မြင် လာတော့ အဲဒီ လိုမှူိူး ရေးရင်သိတ် ပေါ့ သွား မလား လို့ထင် မိပြီး လက် များတွန့်နေလေရော့ သလား။ မိုးချိူသင်း လို ဘဲ သဘောထားပါ။ ဆင် သွားရင် လမ်းဖြစ် ပါတယ်။
Ko Paw - 10/27/08, 1:10 AM
ဓါတ်ကူးတတ်တယ်ဆိုတော့ နောက်တခါ စက်ပျက်ရင် ဆက်ဆက် ပို့စ်တင်ဘို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်...ဟဲဟဲ....
တီဇက်အေဘလော့ဂ်မှာ လက်ပ်တော့ပ်ကို အောက်ကနေ ပန်ကာနဲ့ မှုတ်ပြနေပုံကတော့ လွန်လွန်းပါသဗျာ။ ဒေးဗစ်ကော့ပါးဖီးရဲ့ မျက်လှည့်ဆက်တင်ကို ကြည့်နေရသလိုပါဘဲ။
strike - 10/27/08, 5:55 AM
tza ကပန်ကာနဲ့မရတော့ဘူးထင်ရင် ထိုင်ပြီးစက်ကိုယပ်ပါ ခပ်ပေးနေတာတယ့်ဗျာ၊ပါးစပ်ကလဲတတွတ်တွတ်ဘုရားစာတွေဆိုရင်းနဲ့တယ့်
Anonymous - 10/27/08, 6:43 AM
သမီးလေး ကွန်ပျူတာ ဆော့နေတာ ချစ်ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ။ ပါးစပ်က အသံစုံ အော်ဟစ်နေတဲ့ မျက်နှာလေးကလဲ အရမ်းအပြစ်မဲ့တယ်။ ရိုးသားဖြူစင်တဲ့ နှလုံးသားနဲ့ သမီးလေး မြတ်နိုး ထူးချွန်အောင်မြင်ပါစေ။
TZA - 10/27/08, 12:04 PM
ခုမှပြန်ပေါ်လာတော့တယ်ကိုအန်ဒီ.. အိမ်ထောင်သည်ဆိုတော့ အစကတည်းက နားလည်ပေးပြီးသားပါ၊ မိသားစုကိစ္စက ပိုအရေးကြီးတာပဲလေ။ ကွန်ပြူတာကတော့ မပြောချင်တော့ပါဘူးဗျာ၊ hp ပို့ရမှာ ပျင်းနေတာနဲ့ ခုထက်ထိ ကိုပေါပြောတဲ့ ဆက်တင်အတိုင်းပဲဗျ၊ လက်ကို မြှောက်မြှောက်ထားရတော့ ညောင်းတောင်ညောင်းတယ်။ strike ရဲ့ စိတ်ကူးကောင်းပုံကလည်း စိတ်ညစ်နေသူကို ရီမိစေတယ်ဗျ၊ ခွိခွိ။
Anonymous - 10/27/08, 2:53 PM
sa nyi be. bro keep moving on . i also same. sg more worse....
တက်တူ - 10/27/08, 4:26 PM
ko andy, တမီးလေး ဆော့တာတွက် စိတ်ချရအောင် Toshiba ကထုတ်တဲ့ Monkey proof laptop ဝယ်သုံးပါလား.. ဟီး :P ။
Kay - 10/28/08, 1:09 AM
ဒစ်ဂျစ်တယ် မိသားစု ကြီးပေါ့..ကိုအန်ဒီတို့ရေ..း)
nu-san - 10/28/08, 1:21 AM
ကလေးတို့ မေမေက သားလေး မွေးပြီး သိပ်မကြာဘူး အမ Blog မှာ Comment လာရေးတော့ အံ့သြနေတာ.. အခုတော့ သိပြီ။ ဒါလေးကြောင့်ကိုး.. ကလေးတဖက်နဲ့ ဆိုတော့ အခုလိုလေး သုံးရတာ အဆင်ပြေတာပေါ့.. :)
မြတ်နိုးလေး ဆိုဖာပေါ်မှာ ကွန်ပျူတာ သုံးနေတာ ကြည့်ပြီး ရီချင်နေတာ.. ကွန်ပျူတာကို ရိုက်နေတာ သူ့လက်ကလေး မနာတဲ့အတိုင်းပဲ.. အသည်းယားတယ်.. သားလေးက ဒီဂျစ်တယ် နို့တွေ စို့နေရလို့ တအားထွားတာဖြစ်မယ်.. :D
Andy Myint - 10/28/08, 9:56 PM
ဘလော့ကိုတော့ သံယောဇဉ် မဖြတ်ပါဘူး မဇနိရယ်... အခြေအနေ မပေးတာရော အပင်ပန်း မခံနိုင်တာရော ကြောင့်ပါ :)
ပြောတော့ မခင်ဦးမေရေ... ကျေးဇူး။ (အစ်မ ပြောသလို) အကောင်ကြီးလို့ သွားတိုင်း လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီး လက်လွှတ်စပယ် မလုပ်ရဲပါဘူး။ အချိန်ပေး ဖတ်တဲ့သူတွေကို အားနာလို့။ ဒါပေမယ့်လည်း ရေးနေတာတွေကတော့ နဂိုကတည်းက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးတွေပါပဲ။ ကျမ်းကိုး စာကိုး။ အတွေးအမြင်တွေ ကဗျာတွေ စာတွေ မရေးတတ်ပါဘူးဗျာ။ ကိုယ့်မိသားစု ကြုံတွေ့နေရတာလေးတွေကို ချရေးလိုက်တာပါ။ မခင်ဦးမေ အောင်မြင်နေတာလည်း ကိုယ်တွေ့ပဲ။
ကျွန်တော်တော့ ကျွန်တော့် စက်ပျက်တဲ့ ဓါတ်တွေကို ဖြန့်လိုက်ပြီ ကိုပေါ.. လာဖတ်သူတွေ ကူးစက်သွားပြီး စက်ပျက်ရင်တော့ ဒွတ်ခ
ဟားဟား Strike...TZA ဘ၀က အဲဒီလောက်တောင် ဆိုးလားဗျာ
ကျေးဇူး စာဖတ်သူရေ။ တောင်းပေးတဲ့ ဆုနဲ့လည်း ပြည့်ပါစေ။
ဟုတ်တယ် ကို TZAရေ။ အိမ်ထောင်သည် ဘလော်ဂါဆိုပြီး နားလည် ပေးထာတာ ကျေးဇူးဗျာ။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဆော့သလို ထမင်းမစား ဟင်းမစားလိုမျိူး ဆော့ရင် `မိ´မှာ မကြောက်ရတာဘူးပေါ့။ ဒါမှမဟုတ် မချိုသင်း ပြောသလို ထမင်းသိုး ဟင်းသိုးပေါ့။ မကေကတော့ ဂျိုင်းညှပ် တဲ့...ကွမ်းညှပ် တဲ့။ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ သံပုရာသီးတဲ့။ အခုလည်း ဘလော့လောကမှာ `အိမ်ထောင်သည် ဘလော်ဂါ´ ပေါ့ ဟဲဟဲ၊ ကျွန်တော် ကာဗာယူပုံကတော့ `ကလေးအဖေ ဘလော်ဂါ´ ဆိုပြီး ကလေးတွေနဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေတယ် ပြောလိုက်ရင် အားလုံးက ပို့စ်အသစ် မတက်လည်း ခွင့်လွှတ်ကြတယ် ဟီးဟီး။ တကယ်လည်း အလုပ်ရှုပ်နေလို့ပါ .. ယုံလား နားရွက်ကလေးနဲ့
Thanks Anonymous Gyi hee hee....
တိုရှီဘာတော့ မသိဘူး တက်တူရေ... Panasonic က Toughbook တစ်လုံးတော့ လိုချင်တယ်။
ဟုတ်ပ မကေရေ... ဂျစ်ဂျစ်ဒယ် မိသားစုပေါ့
အမလေး ပြောမနေနဲ့ မနုစံရေ.. ဒါတောင် မြန်မာလို ကောင်းကောင်း မရိုက်တတ်လို့ ကောမန့်တွေ မပေးတာ။ ဖတ်တာကတော့ ဘာဖတ်သလဲ မပြောနဲ့ ... ဘလော့ စွဲနေပြီလေ။
မိုးချိုသင်း - 10/29/08, 5:40 AM
မျှော်လိုက်ရတဲ့ ပို့စ်ပါလား ကို Andy.
သမီးလေးက အရမ်းတတ်နေပြီပဲ။ တမိသားစုလုံး အင်တာနက် စွဲကြသည်ပေါ့။
ကလေးအဖေ ဘလော့ဂါဆိုတော့ ပရိသတ်ရဲ့ နားလည်မှုလဲ ရသေး၊ ရေးစရာအကြောင်းကလဲ ရေးလိုက်တာ ကြည်နူးစရာ။ ကံကောင်းပါ့ရှင်။
rita - 10/29/08, 3:44 PM
huuuu,, ( taw par tay yae)
when i start read this post,, i m worry for future post,, i was though that ko andy gotabit difficult to blog,,, ( nauk nae naw,,, PC kyiachayanay ma kg buu so lal,,, blog lar read nay kya,, pa yeik tat ka,,, wine ku so lal,, ku pa mal,,a htin ma lwel nae naw,,dblog ka post tway ma fat ya yin ma nay naing lo par :) )
Anonymous - 11/12/08, 5:25 PM
I never heard about PC burns with over heat,that I think you haveacheap CPU or that you live in Australia so that's while,you think you are----?
Anonymous - 11/12/08, 6:51 PM
What you want to say? You dare say clearly and better english. Don't fart!
sorry ko andy yay, i can't help writing
Andy Myint - 11/12/08, 9:59 PM
ကလေးအဖေ ဘလော်ဂါဆိုပြီး လုပ်စားနေတာ မချိုသင်းရေ.. ဟဲဟဲ
ဆက်ရေးမှာပါ မရီတာ.. ဘလော့ ပရိတ်သတ်ကြီးက ကလေး ၀ိုင်းထိန်းပေးရင် ဒီထက် ပိုရေးနိုင်မှာ .. :)
ဘာတွေ လာပြောနေတာလဲ အမည်မဖော်သူ ... CPU မှာ Heat Sink ကို မထိတထိ နည်းနည်းလောက် ခွာထားကြည့်ပါလား .. `ဖောက်´ ကနဲ အသံလေးတောင် ကြားရဦးမယ်.. သြော်ဇီမှာ နေတာ မနေတာနဲ့ ဘာမှ မဆိုင်ဘူး။
ပြောလိုက်စမ်းပါ စာဖတ်သူရယ်... ဘာတွေ လာကြောင်နေမှန်မသိဘူး .. ကျေးဇူးပဲ။
Anonymous - 11/14/08, 1:02 AM
On behalf of KAD (Ko AnDy) by MDY Reader
By the way KAD yay ,, Let me secure your blog from being harassed by non-value added attacker
To Green Eyes Mr Anonmyous!
I spotted that you have huge green with envy on how KAD has supportive buddy-jam in his blog. Been browsing KAD’s blog but never stated anything at all, but feeling like it’s worth spending my time in terms of seeing and hearing lovely family of you. But Green Eyes Monster is mentally ill or needed to pass for several years to reach and appreciate holistically what the art of mature blogging culture is. If my guess is not mistaken, Anonymous might be in his 16s or 17s. I wonder why these apprentices are not in command of self-development.
Anonymous - 11/14/08, 3:16 AM
What is ko andy yay Guy,what's the meaning of YAY,I never found out like that word on earth dictionary,Are youaastrologist that you guess my aaaaaaaaaaage ?C means C,do I have to C the way you like it,sorry I'm notafollower like you,why you guys took off my previous C,PLEASE BE GENTLE you funny YAY
Nandar - 11/14/08, 4:07 AM
သူများ ရေ လို့ တစ်လုံးထည့်ပြောတာကိုဘဲ အပြစ်ရှာမနေနဲ့ ငတုံးရေ။ နင့်ကိုနင် တော်တော် တတ်လှပြီထင်မနေနဲ့။ နင့် grammar စုတ်ပြတ်သတ်နေတာကို အဟုတ်မှတ်နေလား။
Anonymous - 11/14/08, 4:41 AM
Hey Nandar,by the name I guess you are FEMININE,but your words are Nasty,SHAME ON YOU
str - 11/14/08, 4:52 AM
"Nandar" ဘေးဖယ်နေ အဲ့ဒီကောင်ကခွေးရူးဟ။
ike - 11/14/08, 4:59 AM
"ခွေးမသား" နဲနဲတောင်အမည်မဖေါ်ရဲဘဲနဲ့၊သူများဘလောက် "J" ၀င်ပြီးလာ"အူ"နေတာသာကြည့်။
Anonymous - 11/14/08, 5:10 AM
ဒီဘလောက် ရေးတဲ့သူ၊ လာလည်သူ အားလုံးလူယဉ်ကျေး၊ ပညာတတ်များဖြစ်ပါသည်။ သူတို့မိသားစုလည်းနှင့် အတူအားလုံးကြည်နူး ကြပါသည်။ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်နှင့် ပျော်စရာ ဘလောက်ကို တတ်ယောင်ကား အရူးချီးပန်းတစ်ကောင် လာဟောင်နေပါသည်။